Kuratidza zvinyorwa neelebheri Křižlice
Evangelical kereke Křížlice
Runyoro rwekaresa rwemusha weKřížlice unotanga kubva ku1492. Kubva kune zvimwe zvinyorwa, zvakadaro, tinodzidza kuti Křížlice yakatove muna 1358 yaive nekereke diki yemapuranga. Muzana ramakore rechigumi neshanu iwo sezviri pachena wakashandiswa nekereke yepasi pevhu. Mushure meHondo yeGomo Dzvuku kwakave kurovera kwakashata kune avo vasiri veKaturike mabhurugwa uye nekuremekedzwa Iko kusimudzirwazve kuumbwa kwepasi, kwakapihwa naFerdinand II. 15. Pakanga pasina mukana - wokukotamira kuchiremera cheChechi yeRoma Katurike kana kubuda munyika. PaJilemnice estate, kwaive kwaKřížlice, mangwanani ano akashaya chinangwa. Munin'ina wemuridzi uye muridzi wenzvimbo Václav Záruba weHustiřany akashuvira vasiri vaKatorike, uye aive zvakare mupi wemabhishopi wekupedzisira weMubatanidzwa wehama, Jan Ámos Komenský.
Mushure mekufa kwake, imba yake yakatorwa kune zvivakwa zveAlfrecht zveWallenstein, gare gare Prince of Frydlant. Kuna Albrecht weWallenstein, zvisinei, zvido zvehupfumi zvaive zvakanyanya kukosha pane zvekunamata, nekudaro machinda ehukama akasara asina kurangwa munharaunda yake. Křížlice musha, chikamu chemusha Jestřabí muMakomo eGiant…
Runyoro rwekaresa rwemusha weKřížlice unotanga kubva ku1492. Kubva kune zvimwe zvinyorwa, zvakadaro, tinodzidza kuti Křížlice yakatove muna 1358 yaive nekereke diki yemapuranga. Muzana ramakore rechigumi neshanu iwo sezviri pachena wakashandiswa nekereke yepasi pevhu. Mushure meHondo yeGomo Dzvuku kwakave kurovera kwakashata kune avo vasiri veKaturike mabhurugwa uye nekuremekedzwa Iko kusimudzirwazve kuumbwa kwepasi, kwakapihwa naFerdinand II. 15. Pakanga pasina mukana - wokukotamira kuchiremera cheChechi yeRoma Katurike kana kubuda munyika. PaJilemnice estate, kwaive kwaKřížlice, mangwanani ano akashaya chinangwa. Munin'ina wemuridzi uye muridzi wenzvimbo Václav Záruba weHustiřany akashuvira vasiri vaKatorike, uye aive zvakare mupi wemabhishopi wekupedzisira weMubatanidzwa wehama, Jan Ámos Komenský. Mushure mekufa kwake, imba yake yakatorwa kune zvivakwa zveAlfrecht zveWallenstein, gare gare Prince of Frydlant. Kuna Albrecht weWallenstein, zvisinei, zvido zvehupfumi zvaive zvakanyanya kukosha pane zvekunamata, nekudaro vatungamiriri vake vehukama vakaramba vasina kurangwa. Křížlice musha, chikamu chemusha Jestřabí muMakomo eGiant…